भारतमा ‘जनता कर्फ्यू’स् कस्तो छ स्थिती ? | Pennepal
Home अन्तराष्ट्रिय भारतमा ‘जनता कर्फ्यू’स् कस्तो छ स्थिती ?
भारतमा ‘जनता कर्फ्यू’स् कस्तो छ स्थिती ?
एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइतबार देशवासीसँग ‘जनता कर्फ्यू’ का दिन बिहान ७ बजेदेखि राती ९ बजेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कन अपिल गरेका छन् । यतिबेला श्रीनगर र बेंगलुरुजस्ता शहरमा करफ्यू लागेको जस्तो स्थिती हुनेछ । प्रशासनले पनि यस्तै बयान दिएको छ । कश्मीरमा हिंस्रक घटनाको इतिहास भएकोले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको छ । यस्तै, बेंगलुरु पुलिसले अनावश्यक रुपमा घरबाट बाहिर निस्कनेलाई कारवाहीको चेतावनी दिएको छ । यद्यपी, दिल्ली पुलिसले कुनै प्रकारको कठोर कदम नलिइने र कुनै जरिवाना पनि नतोकिएको जानकारी दिएको छ ।
दिल्ली पुलिसको कोरोना ट्वीट – ‘राहों मे उनसे मुलाकात हो गई’
भीडलाई जममा हुनबाट रोक्नका लागि थुप्रै ठूला मन्दिर पहिले नै बन्द भइसकेका छन् । आइतबार पनि भारत सबै मन्दिरमा मानिसहरुलाई रोक लगाइएको छ । गोवाको आर्कबिशप फिलिप नेरी फेराओले सबै चर्चमा ‘सन्डे प्रेयर’ पनि रद्द गरेको छ । दिल्लीको पनि पहाडगञ्जस्थित सेन्ट पिटर्स मार थोमस सिरियन चर्च र सेन्ट्रल दिल्लीस्थित क्याथेड्रल चर्चमा पनि सन्डे प्रेयर हुनेछैन । जम्मू–कश्मीर वक्फ बोर्डले पनि आइतबार हुने नमाज रद्द गरेको छ । यसबाहेक उत्तर प्रदेशको इस्लामी स्कूल दारुल उलूम देवबंद पनि आइतबारको दिन बन्द हुनेछ ।
भीडभाड गरे ठाउँको ठाउँ कारबाही
आइतबारको मौसम कस्तो रहला !